गमलामै पुदिना उमारेर अचार बनाएर खाने कि? - हेल्थ आवाज
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ गमलामै पुदिना उमारेर अचार बनाएर खाने कि?
गमलामै पुदिना उमारेर अचार बनाएर खाने कि?
डा.अच्युत शाली घिमिरे सोमबार, २०७७ जेठ १२ गते, १५:०१ मा प्रकाशित
धेरै भयो लकडाउन भएको । कोरोनाको त्रासले विश्वलाई अझ मुक्त पार्न सकेको छैन । अब अझै कति दिन लकडाउन लम्बिने हो, केही आँकलन गर्न सकिदैन् । त्यसैले घरमा नै आफूलाई व्यस्त राख्न केही कृषि र स्व—उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ । यसो गर्दा खेर गइरहेको समयको सदुपयोग हुनुको साथै घरमै उत्पादित ताजा तरकारी र साग सब्जीसमेत खान पाइन्छ ।
गाउँघर फर्किएकाहरु अहिले आफ्नै खेतवारीमा व्यस्त छन् । मकै गोड्न, काक्रो फलाउन, फर्सी फलाउन अनि धानको बिउ राख्न भ्याइ—नभ्याइ छ । अब सहरतिर बस्नेहरुलाई चाहिँ करेसावारीको अभाव हुँदा दिनहुँ अल्छी मानेर बसिरहेका देखिन्छन् । तर, ताजा तरकारी खाने इच्छा र जाँगर भए उपायहरु निकाल्न सकिन्छ । जस्तै गमलामा धनिया, पुदिना, खुर्सानी, गोलभेडा, सागसब्जी, सिमी, भिन्डी आदि रोप्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम माटोमा कम्पोष्ट मल मिलाएर गमलामा भर्नुपर्छ । अनि गमलाको पिधमा पानी जम्न नदिन सानो प्वाल पनि बनाउनुपर्छ । माटो खुकुलो पारेर बीज उमारेपछि दैनिक पानी हाल्ने गरे केही दिनमा नै पुदिना, धनियाहरु मौउलाउछन् ।
गमलामा उम्रिएका पुदिना र धनिया अनि फलेका खुर्सानी र गोलभेडालाई राम्रो संग टिपेर पखाल्ने । गोलभेडालाई तातोपानीमा उमालेर बाहिरको बोक्रा फालेर तयार पार्ने । अनि सबैलाई सिलौटामा राखेर मज्जाले पिस्ने । घरमा भाङ र लसुनको पोटी छ भने अलिकति मिसाउन सकिन्छ । मसिनो हुने गरी पिनिसकेपछि नुन, बेसार र मसला राख्ने अनि कागती भए कागती नभए चुक अमिलो थोरै हाल्ने । थोरै—थोरै सबैले आफ्नो दालभात, तरकारीसँग मिसाएर खाने ।
पुदिनाले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदा
यो ‘लेबिएटी’ फेमेलीअन्तर्गत पर्दछ र यो मेन्था स्पेसिस हो । यसलाई नेपालीमा पतिना पनि भनिन्छ । द्रव्यगुण विज्ञानअनुसार यो कफवातसामक रहन्छ । यसमा भिटामीन ए, एरोमेटिक तेल, टर्पिन, क्याल्सियम र फोसपरस आदि पाइन्छन् । यसको प्रयोज्य अंग पत्र हो ।
यसको प्रयोग विशेष गरी अजीर्ण, श्वास, कास र वमनमा हुन सक्छ । खाना रुचाउने, दुखाइ हरण गर्ने, तौल सन्तुलन राख्ने र रक्तभारसामकका रुपमा समेत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मुख स्वस्थ राख्नुको साथै जिब्रो र दाँतका भागहरु समेत सफा बनाउँछ । छालाका संक्रमणबाट बच्न र स्तनपानमा हुने समस्याका लागि समेत पुदिना उपलब्धिमुलक रहन्छ ।
लकडाउनमा मानसिकरुपले स्वस्थ रहन अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
लकडाउनका बेला मानसिक स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी फाइभ ‘सी’
लकडाउनको समयमा कसरी स्वस्थ्य रहने ?
‘कोभिड-१९’ विरुद्धको लडाइमा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता यसरी बढाउनुहोस्
डा. प्रमिसा खरेलको सल्लाह : यसरी बच्न सकिन्छ छालामा आउने…